AJIGU WAA BINU QUREEYSH MADHIBANKUNA BINU………!!!!!
Waxaa la soo weriyey inay qabiilooyinka waaweyn ee soomaalidu ku abtisato ay dhamaantood ka wada yimaadeen Carab. Carab fog weliba maahee waxay ka yimaadeen Qureesh iyo weliba raaska Nebiga(CSW)oo ah Binu Haashim. Waxaa abtirsiimada Soomaalidu na baraysaa in Samaale, Digil&Mirif, Daarood ay dhamaantood ka soo wada askumeen reer binu Haashim, Soomaaliduna ay inta badan iyaga ka soo farcameen marka laga reebo dadyow fara ku tiris ah oo ka soo horeeyey Soomaalida iyo kuwa ka danbeeyeyba. Dadka ay faraca soomaalidu meesha ugu timid waxaa ka mid ah; Midgaan (Musa dheryie, Madhiban), Tumaal, Yibir, Hinjile, Turyare, Magdaleh iyo Zeylici. Dadkani waxay waagii hore Guur, Qaaraan iyo Quudba la wadaagi jireen soomaalida kale. Waayo danbe ayaa takoorku ku bilaawday oo la leexiyey badasho faracii carabta sheeganay ka batay, Dagaal lagu jabiyey awgii ama sababo aan qiima lahayn oo sheeka xariir ah. Dadka lagu magacaabo Jareer Weyn (Bantu) iyo dadka ka soo jeeda carabta ee degan Xamar, Marka iyo agagaarkeedana dib ayey ka yimaadeen.
Waxaanu ognahay in Nebi Ismail(CS) intaan la keenin Khaliijka ay dad Carab ahi deganaayeen. Dadka lagu magacaabo Carabna kuwooda ugu laandheereysan ee saxda ahi waxay degen yihiin Yemen. Markaa Nebi Ismail(CS) muusan ahayn Carab ee gabadh buu carabtii ka guursaday ka dibna faraciisii baa la Carabeeyey.
Hadaba anagoo ka faaiideysanana cilmiga Philology(Isbarbardhiga taariikhda iyo afafka) waxaan shaki ku jirin in qowmiyadahan la yaso ee dulmani la Soomaaliyeeyey ee ay iyagu aheeyeen dadkii laandheeraha ka ahaa wadanka maanta loo yaqaan Soomaaliya. Meeshay doonaan qowmiyadahani asalkoodii hore ha ka yimaadeen, laakiin waxay muddo fog ku noolaan jireen iyagoon la dulmin Soomaaliya intaysan Samale, Darood iyo Digil&Mirifle iman oo ay wareegi jireen Saxaraha Carabta!
Hadaba aanu niraahno Odayadaasi waxay ahaayeen Carab, Soomaalida ka soo farcantay ee maanta joogta ma Carabaa!! Ma u egyihiin awoowayaashoodii hore? Ma nalaga heli karaa wax astaan ah oo aan ugu ekaan karno ilmaadeeradeen degan Khaliijka? Waa maxay magaca Soomaalida loogu yeedho markay tagto khaliijka? Inadeeeeeeeer miyaa?
Waxaan shaki ku jirin in aanu kala kulano cunsuriyad xun markaanu tagno Dhulkii ay awoowayaasheen ka yimaadeen, laakiin waxaanu carada iyo ciilka isaga reebnaa Midgaanka, Jareerka, Tumaalka iwm.
Hadaba aanu si cilmiyeeysan u sheegno inaanu Carab nahay iyo in kale!
Waxaa yimid dhulkan Niman laga soo farcamay oo la yidhi waxay ka yimaadeen Carab. Markaa Carabtu midab ahaan waa BARAX (LIGHT SKIN). Micnuhu waa madow xigeen ama maaha CADAAN. Hadaba Carabkii yimid oo ahaa (Shiiqsane) 50% Carab ah wuxuu guursaday gabadh(Shiiqiye) 100% Madow ah. Dhashiisu waxay noqonasaa min 13.5% Carabnimo ah. Tafiirta 2-aadna 6.5% Carabnimo ah iyo kuwo 100% Madow ah ta 3-aadna waxay wada noqonayaan WADA MADOW WADA SHIIQIYE AH. Hadaba imisa farac baa ka soo wareegtay odayada kala duwan ee la leeyahay waxay ka yimaadeen Carab? Maxaanu ka sheegan karnaa odaygaa maanta Midab, Dhaqan, iyo Af? Bal eeg Isku talaalkan hoose
CC= CARAB 50%(CODOMINANCE) iyo MM= Gabadh Madow 100%
CC X MM
CM X MM
CM CM MM MM Wada madow yara cas
100% MM Waa Wada Madow
Wixii ka danbeeyana WAABA WADA DHUXUL
QORAALADII HORE EE C/RAXMAAN EELAY